शरिरका यी ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु ! – Khabar Art Nepal
शरिरका यी ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु !
By खबर आर्ट नेपाल	 On २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:५३
तसर्थ पुरूषले यस्ता युवती जीवनसाथीको रूपमा स्विकार्न गर्न अर्थात नछोड्न् ज्योतिषहरू सुझाव दिने गर्छन्हा त दुईवटै हात लामो भएका महिलाहरुलाई जीवनमा ठूलो सुखशान्ती आराम मिल्नुको साथै असल जीवनसाथी मिल्ने गर्छ। कपाल लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन।
घाँटी लामो घाँटी भएका महिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान-प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्ने छ। कान शरिरका दुई वटै कान ठूलो भएका महिलाहरु लामो आयुको हुने र निकै भाग्यमानी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
खुट्टा लामो खुट्टा भएका महिलाहरु धेरै भाग्यमानी हुने र जीवनमा प्रशस्त धन लाभ गर्न सक्ने। ना’ईटो ठूलो वा गहिरो ना’ईटो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अत्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन ।
अभिनेत्रीद्वारा आत्महत्या, प्रेमीमाथी लगाइन् आरोप
अन्तरजातीय चार कलाकार जोडी: जो जात व्यवस्थासँग जुधे